Bangiga Nib-International Bank oo Laan Cusub Ka Furtay Magaalada Awbare ee Gobolka Faafan. - Cakaara News
Awbare(CakaaraNews) Isniin June 24,2013.Waxaa laan cusub( branch) ka furtay degmada awbare Gaar ahaan Magaalada Awbare Nib international bank iyadoona ay xafladdii furitaankaasi ka soo qayb galeen maareeyaha guud ee Nib international bank mudane lame, gudoomiye ku-xigeenka ahna ku sii simaha gudoomiyaha degmada awbare mudane cabdi ibraahin,duqa magaalada awbare mudane Iid Cismaan, ganacsato iyo waliba qaarka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada awbare.
Waxaana furitaankii Munaasabadan ugu horayntii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada ahna ku sii simaha gudoomiyaha mudane cabdi ibraahin oo sheegay ahmiyada balaadhen ee uu u leeyahay bangigani guud ahaanba bulshada degmada awbare,Dhigaalka lacagaha(Saving) iyo Ganacsatada Degmada Awbare.
Sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay furitaankii laanta Cusub ee Bankiga Gaarka loo leeyahay ee Nib Duqa magaalada Awbare mudane Iid Cismaan oo ka warbixiyay in siwayn baahi loogu qabay furintaanka bangigan maadaama oo ay bulshadu u baahan tahay meelo ay ku kaydsadaan lacagahooda,Bedelka Lacagaha islamarkaana wax wayn ka tari doona dirida lacagaha iyo xawilaada ayuu yidhi Duqu.
waxaa Isaguna ka hadlay maareeyaha guud ee bangia Nib mudane lame oo siwayn uga warbixiyay taarkiikhda Nib-international Bank oo ay Saami wadaag u leeyihiin Qaar ka mida maalqabeenada DFI(Share Holder)wuxuuna sheegay in ay lantan maanta la furay Magaalada Awbare ay tahay Laantii 70aad ee guud ahaan Dalka Itoobiya laga furo,islamarkaana carabaabay in ay mar kasta Diyaar u yihiin ay bulshada meel kasta ku siiyaan Adeeg Tayo leh,aamin ah islamarkaana Degdegsiimo badan.
Dhanka kale Waxaa iyaguna Afkaarahooda Yididiilada leh ka Dhiibtay Ganacsatada iyo Qaybaha kale duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada awbare oo iyaguna dareenkooda ku aadan Furitaanka laanta cusub ee Nib Bank laga furay Magaalada Awbare ee degmada awbare ka hadlay ayaa sheegay in ay aad ugu baahnaayeen Banki looga furo Magaalada Awbare oo ay kaga faaiidaysan doonaan Dhigaalka Lacagaha(saving),Dirida lacagaha iyo ganacsigoodaba.